ပထမဆုံးရည်းစားနဲ့ ချိန်းတွေ့တဲ့အချိန် မိန်းကလေးများ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အလွဲများ - For her Myanmar
ရည်းစားထားတဲ့နေရာမှ ဆရာမကြီးဖြစ်နေပါစေ …အသစ် အသစ်သော ရည်းစားတွေထားပြီး ပထမဆုံး ချိန်းတွေ့တဲ့နေ့မှာ ဒါမျိုးလေးတွေ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ မိန်းကလေးအများစု ဖြစ်နေကျပါပဲ….. ဖြစ်တိုင်းလည်း ချစ်စရာအမှတ်တရလေးတစ်ခု ကျန်ရစ်တာပေါ့နော်.. ယောင်းတို့ရော ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ ပထမဆုံး ဒိတ် လုပ်တုန်းက အချိန်လေးတွေက ဒီလိုဟုတ် မဟုတ် ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
(၁) ထိုင်စရာနေရာ ရွေးရခက်ခြင်း။
ပထမဆုံးဒိတ်ဆိုတော့ တူတူလည်း ထိုင်ချင်တယ် ။ မျက်နှာချင်းဆိုင်လည်း ထိုင်ချင်တယ် ။ ဘယ်နေရာထိုင်ရမှန်း မသိသလို ချောင်ကျလွန်းတဲ့ နေရာကို မရွေးမိဖို့ကလည်း မျက်လုံးကစားရသေးတယ်လေ။ ကိုယ်က အရင်ထိုင်လိုက်တော့ ကိုယ်တော်ချောက ဘေးကခုံကို လိုက်ထိုင်ရင် ဘယ်နေရာ ဘယ်ခုံထိုင်ရင် အဆင်ပြေမလဲဆိုတာ ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ဟာသတော့ဖြစ်နေတာပေါ့လေ။
(၂) အားပါးတရစားရမယ့်အစားတွေ မမှာမိအောင်သတိထားနေရခြင်း။
ကော်ဖီဖြစ်ဖြစ် အရည်တစ်ခုခုပဲ များသောအားဖြင့် မှာဖြစ်တယ်။ဟိုက မှာလေ ကြိုက်တာစားပါ ဆိုလည်း ရှက်သလိုလိုဖြစ်နေတော့ ဗိုက်ဘယ်လောက်ဆာဆာ ကော်ဖီအေးတစ်ခွက်ပဲ ရတယ် တော်ပြီဆိုပြီး နောက်တစ်ခေါက်မှ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လာစားဦးမယ်လို့ကြိမ်းဝါး၊ စားချင်သမျှကို ကြိတ်မှိတ်ပြီး ဘယ်ဟာကိုမှ သိပ်မစားသလိုလို စတိုင်လ်က ဖမ်းရသေးတာကိုး။ တွဲတာကြာလာတော့လည်း ပေါ်တာပါပဲ။ ဟီးးး ပထမဆုံးဒိတ် ဆိုတော့လည်း သတိထားရတာပေါ့လေ။
Related article >>> ချစ်သူနဲ့ ချိန်းတွေ့တဲ့အချိန် ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ အပြုအမူ(၅)မျိုး
(၃) အိတ်ကို ဘယ်နားချထားရမှန်းမသိ ဖြစ်နေခြင်း။
စိတ်တော့ လှုပ်ရှားတာပေါ့နော်… လှုပ်ရှားတာက မသိစေချင်ပါဘူးဆို လွယ်လာတဲ့ အိတ်ကို ဘေးချလိုက် ခုံပေါ်တင်လိုက် ပေါင်ပေါ်တင်လိုက်နဲ့.. ပြီးတော့ ရယ်ပြလိုက်နဲ့ သူ့ဘာသာနေတဲ့အိတ်ကို အလုပ်ရှုပ်နေတတ်တာမျိုး။ ကိုယ်အရမ်းကြွေတဲ့ ခရပ်ရ်ှနဲ့များ ဒီလို တွေ့ကြည့်ပါလား.. အဲ့လိုဆို စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းလို့ အိတ်ထဲကနေ တစ်ရှုးထုတ်လိုက် ATMကဒ်ထုတ်လိုက်နဲ့ ခုပဲ ထရှင်းတော့မလိုလို၊ ထွက်ပဲ ပြေးတော့မလို တစ်ယောက်တည်း ကမ္ဘာတွေပျက်နေတတ်တာလည်း ကိုယ်တွေပါပဲ။
(၄) အိမ်သာဝင်ချင်သလိုလို စိတ်ထဲမှာ ခံစားရခြင်း။
ပထမဆုံးဒိတ်ဆိုတော့လည်း အိမ်သာ ခဏသွားမယ်လို့ပြောရတာ ဝန်လေးတယ်လေ။ တကယ်က မသွားချင်ပါဘူး ဒါပေမဲ့ ဘာဖြစ်တယ်လည်း မသိဘူး စိတ်ထဲလည်း ခုလု ခုလု နဲ့ ရှူးပဲပေါက်ချင်လိုလို အိမ်သာပဲဝင်ချင်သလိုလို ဖြစ်ဖူးလား?????
(၅) ဖုန်းတွေပဲ စွတ်သုံးနေခြင်း။
မျက်နှာချင်းဆိုင်ရမှာ ရှက်သလိုလို ဖြစ်နေတော့ ဖုန်းကို လက်ထဲက မချတော့တာပါ။ စကားပြောစရာ ရှာမရရင် လိုင်းပေါ် ခဏ ပြေးတက်လိုက်သေးတယ်။ဒီသီချင်းလေး နားထောင်ကောင်းတယ် သိလားနဲ့ ကြိုက်မကြိုက်လည်း သေချာမသိပေမဲ့ ဇွတ်နားထောင်ခိုင်းသေးတာ။ သီချင်းနားထောင်နေတဲ့ အချိန်တော့ စိတ်လှုပ်ရှားတာကို သက်သာစေတယ်လေ။
Related article >>> အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေ လမ်းခွဲပြတ်စဲကြတဲ့အခါ…
တကယ်က ခေါ်စရာ ကိစ္စက ထွေထွေထူးထူး မရှိဘူး။ ခဏလေး ဖုန်းလာနေတယ် ဆိုပြီး အရေးမကြီးတာတွေကို သူငယ်ချင်းနဲ့ ပြောနေတတ်တယ်။ သူငယ်ချင်းက ဘယ်ရောက်နေတာလဲ မေးရင် ဖြေရမှာ ရှက်သလိုလို ဖြစ်တော့ မုန့်စားနေတာ နဲ့ နောက်မှ ငါပြောပြမယ်ဆိုပြီး ပြောရတာက အလုပ်တစ်ခု ဟီးဟီး… အရမ်းရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းဆို ဘယ်ရောက်နေတာ ဘယ်သူနဲ့ ဘာတွေလုပ်နေတယ် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ… အခြေအနေက ကောင်းလား မကောင်းလား လှမ်းတိုင်ပင်လိုက်သေးတာမျိုး…
(၇) ဝတ်လာတဲ့အဝတ်အစားတွေက ဟိုနားယားသလိုလို ဒီနားယားသလိုလို ဖြစ်ခြင်း။
ဝတ်လာတုန်းကတော့ အကောင်းဆုံးနဲ့ ကိုယ်အလှဆုံးလို့ ထင်တဲ့ အဝတ်ကို ဝတ်လာတာပဲ။ သူနဲ့တွေ့မှ အဝတ်အစားက သက်သောင့်သက်သာ မရှိတော့သလိုလို ဂုတ်က တံဆိပ်ကပဲ ယားလာသလိုလိုနဲ့ ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူး။ ပခုံးကျုံ့ထိုင်လိုက် စကားပြောလိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ ခေါင်းကိုငုံ့ပြီး စီးလာတဲ့ ဖိနပ်ကို ချွတ်လိုက် ပြန်စီးလိုက် ပြန်စီးလိုက် ချွတ်လိုက်နဲ့ တစ်ယောက်တည်း အလုပ်ရှုပ်နေပြန်ရော။ အဲသလောက်ကြီးဖြစ်စရာ မလိုပေမဲ့ ပထမဆုံး ဒိတ်ဆိုတော့ လူက အဲ့လို အငြိမ်မနေနိုင်တာပါဆို…
(၈)ငါတို့အတွဲမှန်း အရမ်းသိသာသွားသလားဆိုပြီး စိုးရိမ်ခြင်း။
အတွဲကတော့ အတွဲပေါ့နော်… အဲ အတွဲပေမဲ့ ငါတို့ပုံစံကြည့်ပြီး အတွဲမှန်း သတိထားမိပြီလား မသိဘူးဆိုပြီး ဘာတွေ ဆိုက်ကိုဝင်လို့ ဝင်မှန်းမသိသော ပေါ့နော်။ အတွဲတွေပဲ ဝင်တဲ့နေရာဆိုရင်လည်း တစ်မျိုး… ခုက စားသောက်ဆိုင်လေးထဲ ဝင်လိုက်ရင်ပဲ ထိုင်ခုံနေရာမရမှာကျလို့… ဇွတ်တွေကို ထိုင်ချင်နေတော့တာ ရှေ့ကနေ စွတ်ရွတ်ဝင်ထိုင်ပြီး စကားပြောရင်လည်း အသံက သိပ်မထွက်ချင်တော့တာ အတော်များများ ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။
ပြောမယုံ ကြုံမှသိ ဆိုသလို… ပထမဆုံး ဒိတ်မှာတော့ မိန်းကလေးအများစုက ဒီထဲက တစ်ချက်ချက်တော့ လာငြိတတ်တာပါပဲ။ ယောင်းတို့တုန်းကရော ဒီလိုတွေဖြစ်ခဲ့ဖူးလား။ ကြုံခဲ့တဲ့ အမှတ်တရလေးတွေ ကွန်မန့်မှာရေးရင် ပြန်ခွီ..အဲလေ ကြည်နူးရအောင်လို့စ်။
Wai Zin (For Her Myanmar)
ရညျးစားထားတဲ့နရောမှ ဆရာမကွီးဖွဈနပေါစေ …အသဈ အသဈသော ရညျးစားတှထေားပွီး ပထမဆုံး ခြိနျးတှတေဲ့နမှေ့ာ ဒါမြိုးလေးတှေ ကွုံရတတျပါတယျ။ မိနျးကလေးအမြားစု ဖွဈနကေပြါပဲ….. ဖွဈတိုငျးလညျး ခဈြစရာအမှတျတရလေးတဈခု ကနျြရဈတာပေါ့နျော.. ယောငျးတို့ရော ကိုယျ့ခဈြသူနဲ့ ပထမဆုံး ဒိတျ လုပျတုနျးက အခြိနျလေးတှကေ ဒီလိုဟုတျ မဟုတျ ဖတျကွညျ့ပါဦး။
(၁) ထိုငျစရာနရော ရှေးရခကျခွငျး။
ပထမဆုံးဒိတျဆိုတော့ တူတူလညျး ထိုငျခငျြတယျ ။ မကျြနှာခငျြးဆိုငျလညျး ထိုငျခငျြတယျ ။ ဘယျနရောထိုငျရမှနျး မသိသလို ခြောငျကလြှနျးတဲ့ နရောကို မရှေးမိဖို့ကလညျး မကျြလုံးကစားရသေးတယျလေ။ ကိုယျက အရငျထိုငျလိုကျတော့ ကိုယျတျောခြောက ဘေးကခုံကို လိုကျထိုငျရငျ ဘယျနရော ဘယျခုံထိုငျရငျ အဆငျပွမေလဲဆိုတာ ကိုယျ့အတှေးနဲ့ကိုယျ ဟာသတော့ဖွဈနတောပေါ့လေ။
(၂) အားပါးတရစားရမယျ့အစားတှေ မမှာမိအောငျသတိထားနရေခွငျး။
ကျောဖီဖွဈဖွဈ အရညျတဈခုခုပဲ မြားသောအားဖွငျ့ မှာဖွဈတယျ။ဟိုက မှာလေ ကွိုကျတာစားပါ ဆိုလညျး ရှကျသလိုလိုဖွဈနတေော့ ဗိုကျဘယျလောကျဆာဆာ ကျောဖီအေးတဈခှကျပဲ ရတယျ တျောပွီဆိုပွီး နောကျတဈခေါကျမှ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ လာစားဦးမယျလို့ကွိမျးဝါး၊ စားခငျြသမြှကို ကွိတျမှိတျပွီး ဘယျဟာကိုမှ သိပျမစားသလိုလို စတိုငျလျက ဖမျးရသေးတာကိုး။ တှဲတာကွာလာတော့လညျး ပျေါတာပါပဲ။ ဟီးးး ပထမဆုံးဒိတျ ဆိုတော့လညျး သတိထားရတာပေါ့လေ။
Related article >>> ခဈြသူနဲ့ ခြိနျးတှတေဲ့အခြိနျ ရှောငျကွဉျသငျ့တဲ့ အပွုအမူ(၅)မြိုး
(၃) အိတျကို ဘယျနားခထြားရမှနျးမသိ ဖွဈနခွေငျး။
စိတျတော့ လှုပျရှားတာပေါ့နျော… လှုပျရှားတာက မသိစခေငျြပါဘူးဆို လှယျလာတဲ့ အိတျကို ဘေးခလြိုကျ ခုံပျေါတငျလိုကျ ပေါငျပျေါတငျလိုကျနဲ့.. ပွီးတော့ ရယျပွလိုကျနဲ့ သူ့ဘာသာနတေဲ့အိတျကို အလုပျရှုပျနတေတျတာမြိုး။ ကိုယျအရမျးကွှတေဲ့ ခရပျရျှနဲ့မြား ဒီလို တှကွေ့ညျ့ပါလား.. အဲ့လိုဆို စိတျလှုပျရှားလှနျးလို့ အိတျထဲကနေ တဈရှုးထုတျလိုကျ ATMကဒျထုတျလိုကျနဲ့ ခုပဲ ထရှငျးတော့မလိုလို၊ ထှကျပဲ ပွေးတော့မလို တဈယောကျတညျး ကမ်ဘာတှပေကျြနတေတျတာလညျး ကိုယျတှပေါပဲ။
(၄) အိမျသာဝငျခငျြသလိုလို စိတျထဲမှာ ခံစားရခွငျး။
ပထမဆုံးဒိတျဆိုတော့လညျး အိမျသာ ခဏသှားမယျလို့ပွောရတာ ဝနျလေးတယျလေ။ တကယျက မသှားခငျြပါဘူး ဒါပမေဲ့ ဘာဖွဈတယျလညျး မသိဘူး စိတျထဲလညျး ခုလု ခုလု နဲ့ ရှူးပဲပေါကျခငျြလိုလို အိမျသာပဲဝငျခငျြသလိုလို ဖွဈဖူးလား?????
(၅) ဖုနျးတှပေဲ စှတျသုံးနခွေငျး။
မကျြနှာခငျြးဆိုငျရမှာ ရှကျသလိုလို ဖွဈနတေော့ ဖုနျးကို လကျထဲက မခတြော့တာပါ။ စကားပွောစရာ ရှာမရရငျ လိုငျးပျေါ ခဏ ပွေးတကျလိုကျသေးတယျ။ဒီသီခငျြးလေး နားထောငျကောငျးတယျ သိလားနဲ့ ကွိုကျမကွိုကျလညျး သခြောမသိပမေဲ့ ဇှတျနားထောငျခိုငျးသေးတာ။ သီခငျြးနားထောငျနတေဲ့ အခြိနျတော့ စိတျလှုပျရှားတာကို သကျသာစတေယျလေ။
Related article >>> အခဈြဆုံးသူငယျခငျြးတှေ လမျးခှဲပွတျစဲကွတဲ့အခါ…
(၆) သူငယျခငျြးဆီကို ဖုနျးချေါသလိုလုပျခွငျး။
တကယျက ချေါစရာ ကိစ်စက ထှထှေထေူးထူး မရှိဘူး။ ခဏလေး ဖုနျးလာနတေယျ ဆိုပွီး အရေးမကွီးတာတှကေို သူငယျခငျြးနဲ့ ပွောနတေတျတယျ။ သူငယျခငျြးက ဘယျရောကျနတောလဲ မေးရငျ ဖွရေမှာ ရှကျသလိုလို ဖွဈတော့ မုနျ့စားနတော နဲ့ နောကျမှ ငါပွောပွမယျဆိုပွီး ပွောရတာက အလုပျတဈခု ဟီးဟီး… အရမျးရငျးနှီးတဲ့ သူငယျခငျြးဆို ဘယျရောကျနတော ဘယျသူနဲ့ ဘာတှလေုပျနတေယျ ဘာဆကျလုပျရမလဲ… အခွအေနကေ ကောငျးလား မကောငျးလား လှမျးတိုငျပငျလိုကျသေးတာမြိုး…
(၇) ဝတျလာတဲ့အဝတျအစားတှကေ ဟိုနားယားသလိုလို ဒီနားယားသလိုလို ဖွဈခွငျး။
ဝတျလာတုနျးကတော့ အကောငျးဆုံးနဲ့ ကိုယျအလှဆုံးလို့ ထငျတဲ့ အဝတျကို ဝတျလာတာပဲ။ သူနဲ့တှမှေ့ အဝတျအစားက သကျသောငျ့သကျသာ မရှိတော့သလိုလို ဂုတျက တံဆိပျကပဲ ယားလာသလိုလိုနဲ့ ဘာဖွဈမှနျးမသိဘူး။ ပခုံးကြုံ့ထိုငျလိုကျ စကားပွောလိုကျဖွဈနတောပေါ့နျော။ ခေါငျးကိုငုံ့ပွီး စီးလာတဲ့ ဖိနပျကို ခြှတျလိုကျ ပွနျစီးလိုကျ ပွနျစီးလိုကျ ခြှတျလိုကျနဲ့ တဈယောကျတညျး အလုပျရှုပျနပွေနျရော။ အဲသလောကျကွီးဖွဈစရာ မလိုပမေဲ့ ပထမဆုံး ဒိတျဆိုတော့ လူက အဲ့လို အငွိမျမနနေိုငျတာပါဆို…
(၈)ငါတို့အတှဲမှနျး အရမျးသိသာသှားသလားဆိုပွီး စိုးရိမျခွငျး။
အတှဲကတော့ အတှဲပေါ့နျော… အဲ အတှဲပမေဲ့ ငါတို့ပုံစံကွညျ့ပွီး အတှဲမှနျး သတိထားမိပွီလား မသိဘူးဆိုပွီး ဘာတှေ ဆိုကျကိုဝငျလို့ ဝငျမှနျးမသိသော ပေါ့နျော။ အတှဲတှပေဲ ဝငျတဲ့နရောဆိုရငျလညျး တဈမြိုး… ခုက စားသောကျဆိုငျလေးထဲ ဝငျလိုကျရငျပဲ ထိုငျခုံနရောမရမှာကလြို့… ဇှတျတှကေို ထိုငျခငျြနတေော့တာ ရှကေ့နေ စှတျရှတျဝငျထိုငျပွီး စကားပွောရငျလညျး အသံက သိပျမထှကျခငျြတော့တာ အတျောမြားမြား ကွုံဖူးကွပါလိမျ့မယျ။
ပွောမယုံ ကွုံမှသိ ဆိုသလို… ပထမဆုံး ဒိတျမှာတော့ မိနျးကလေးအမြားစုက ဒီထဲက တဈခကျြခကျြတော့ လာငွိတတျတာပါပဲ။ ယောငျးတို့တုနျးကရော ဒီလိုတှဖွေဈခဲ့ဖူးလား။ ကွုံခဲ့တဲ့ အမှတျတရလေးတှေ ကှနျမနျ့မှာရေးရငျ ပွနျခှီ..အဲလေ ကွညျနူးရအောငျလို့ဈ။
Tags: date, Fun, love, memorable, Relationship,်first date
သှားဖွဲပွီး ရယျနိုငျဖို့ ဒီ (၆) ခကျြသာ လိုပါတယျ။
ယောင်းတို့အတွက် Suncream ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး (၅)ချက်